Shanghai Bosun Abrasive Co., Ltd. kuyinto inkampani professional olwalwenza, okungase cwaninga, ukukhiqiza futhi adayise zonke izinhlobo athile. Imikhiqizo eziyinhloko zihlanganisa zonke izinhlobo steel shot, steel namatshana, steel Imi wire shot, engagqwali amabhola, aluminium amabhola, zinc amabhola, ithusi amabhola kanye isihlabathi ithusi, corundum brown, black corundum nokunye. Le nkampani ine imishini eziphambili nobuchwepheshe, amandla eqinile ubuchwepheshe nepheleleyo izindlela izinga ukuhlolwa. Imikhiqizo ngokuqinile ekhiqizwa futhi lwahlolwa ngokuvumelana ejwayelekile isihlobo, ngakho-ke yethembekile amakhasimende ethu futhi wakhethwa 'njengomuntu umkhiqizo ebekwe izinkampani eziningi esikhiqiza imishini esihlabathini-kuqhuma.
Inkampani isidlulile ISO9001 ngamazwe isitifiketi izinga uhlelo, imikhiqizo kabanzi shipbuilding, isitsha, imoto, steel, Foundry, imishini, izimayini, itshe kanye nezinye izimboni, okuyinto sekudayiswe ezifundazweni ezingaphezu kuka-20 futhi imizi China bese zithunyelwa e-United States, eCanada, amazwe aseYurophu futhi amazwe Southeast Asia. Imikhiqizo yethu kanye izinga sesamukelwe amakhasimende emhlabeni wonke.
Le nkampani ukuthuthukisa brand ngokusebenzisa ukungenisa professional ukuphathwa ithalente, emisha lobuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa komkhiqizo. Ikhodi yenkampani zokuziphatha yenza izinto ezingokoqobo, egcizelela kahle, ukubambisana, siyisebenzele ngokwethembeka futhi okwenza ukuthuthukiswa ezivamile. Futhi wumgomo inkampani uthuthuka kobuchwepheshe, abafuna ukusebenza kahle nge izindleko, ukuthuthukisa izinga, kanye nokwenza ngcono ngabaphathi. Ukusebenzisa ukumaketha eziphambili kanye nomqondo service ukuthuthukisa ukubaluleka kanye credit inkampani nokunikeza eliphezulu umkhiqizo nesevisi kumakhasimende ekhaya aphesheya. Masenze ukuthuthukiswa ezivamile futhi nokwakha ikusasa elingcono.